Nhoroondo yeKambani - WEITAI
WTM Kufamba mota
PHV Yekupedzisira Dhiraivha
MAG Kufamba mota
JMV Track Dhiraivha
700CK Track Dhiraivha
WBM Track Motokari
PCR Swing mota
MSG Swing mota
M2X / M5X Swing mota
WSM Swing mota
Weitai Hydraulic ndeimwe yeChina inotungamira hydraulic vatengesi, ekutanga hydraulic mabhizinesi ayo anoshanda mukutengesa bhizinesi kwemakumi emakore. Isu takazvipira kupa yakanakisa hydraulic zvigadzirwa nemasevhisi kune ese mabhizinesi nevashandisi vekupedzisira pasirese.
Pakutanga kwekutanga, isu tiri OEM fekitori, uye zvishoma nezvishoma takagadzira ive yakazara kambani inobatanidza kugadzirwa, kutengeserana uye kudyara. Hydraulic motors ndeimwe yezvigadzirwa zvedu zvikuru. Kuwedzera kune edu ega hydraulic mafekitori, isu tiri mugovani wemhando yepamusoro ye hydraulic mota yekugadzira. Mafekitori edu ese ISO anozivikanwa uye vedu vezvinhu vatengesi vese vakawana CE, RoHS, CSA uye UL zvitupa. Tinogona kugadzira uye kugadzirisa maererano nemadhirowa kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi.
Izvo zvigadzirwa zveMotokari zvinosanganisira asi hazvirevi kune mafambiro ekufambisa, mota dzinofamba uye mavhiri-mota. Motors edu ane epamberi dhizaini dhizaini uye inopa yakakwira vhoriyamu kunyatsoita, yakakwira simba uye yakanaka kugadzikana iyo iri kure kupfuura edu emakwikwi emamota. Izvi zvakakonzera kudiwa uye kugadzirwa kweanopfuura makumi mana ezviuru Weitai mafambiro emota mu2019. Weitai mafambiro emota ikozvino akaverengerwa mumutsetse wekugadzira wevanogadzira zvigadzirwa seSANY, XCMG uye SDLG.
SeShandong Hydraulic Association's (SDHA) Secretary Company uye yakazara nzwisisika yekumisikidza chikuva chematunhu hydraulic sangano, Weitai inodada nekumiririra China uye nekugovana yedu yemhando yepamusoro hydraulic zvigadzirwa nenyika. Weitai Hydraulic yakatove yakasarudzwa kuve ye2018 Yegore Yakasarudzika Enterprise paGore Negore Musangano uye Akangwara Kugadzira Foramu yeShandong Equipment Kugadzira Association, uye isu tinoedza kuramba tichivaka pane izvi kubudirira.